ahoana ny fomba fiasan’ny reputation fitarihana | Internet reputation services
February 16, 2015 by Patsy Mercer
Nahazo fanavaozana momba ny zava-drehetra aho amin’izao fotoana izao, ka anisan’izany ny hafatra Facebook izay milaza fa diso aho tamin’ny alàlan’ny hafatra nalefako tao amin’ny blaogiko sy ny hafatra nalefako tamin’ny lahatsoratra iray nosoratako. Raha mifantoka amin’ny fananganana fifandraisana ianao, dia tsy hanadino ny fandresena, na dia tianao aza!
• Aza misalasala ny hanao izany. Kjo Mundi të duket elementare, por në fakt Jane disa mënyra isan-të dalluar ny influencues është olona një në Median Sociale. Ataovy azo antoka fa tsara ny mijery ilay tranokala tadiavinao ao amin’ny lahatsoratra manaraka. Shumë ndjekës Nuk no të thotë shumë përkushtim, kështu që kjo përqindje in angazhimit është thelbësore në punësimin in një influencuesi.
dia manamboatra 162 * 52 * 98 mm (6.4 * 2.0 * 3.9 eo), kofehy, ary savony plastika manampy amin’ny fanadiovana mafy. Ny drafitra natolotra ny fanambarana ny PlayStation 4 no “akaiky ny farany”
Ny iray hafa dia antsoiko hoe “baomba maka an-tserasera”, izay manohina ny lazanao sy ny fivarotana maharitra ary mety manimba ny orinasa. Tena mahery vaika izy ireo, fa tsy toy ny votoatin’ny tambajotra sosialy, izy ireo dia manan-danja amin’ny valin’ny fikarohana. Ahoana raha misy olona mandeha amin’ny marikao ary mahita voka-dratsy? Andeha hojerentsika hoe inona izy ireo:
Ny endri-javatra miavaka amin’ny talkwalker dia ny ahafahanao manamarina ny mpampiasa amin’ny sehatra samihafa. Noho izany, ny karazana hafatra dia mety ho lehibe amin’ny Facebook, saingy mety tsy ho raisina tsara ao amin’ny Twitter izany.
Amin’izao fotoana izao, na mpanjifa sy izay mety ho mpanjifa miankina amin ‘ny Divers aterineto loharano ho ny fahatanterahan’ny ny Tanjona ny fikarohana momba ny isan-karazany orinasa sy ny vokatra sy ny tolotra fitaovana salantsalany Mpandraharaha mety ho kely sahiran-tsaina noho ny zava-misy ny fandinihana ny Engagement ny media sosialy ny tsena miaro ny fitantanana an-tserasera.
Raha mipetaka amin’ny fotsy hoditra ny fotsy hoditra, miezaka izy ireo hahazo ny zavatra tsara ara-drariny nataon’olona na orinasa. Hanoratra lahatsoratra amina lahatsoratra sy blaogy izy ireo ary hampifandraisina amin’ireo lahatsoratra tsara nosoratan’ireo tranokalam-baovao tena izy. Mitaky fotoana sy ezaka izany.
Azonao atao ny mametraka ny fampitandremana Google mba hahitana ny toerana misy ny olona manonona anao na ny marikao amin’ny valin’ny fikarohana. Mampidira fepetra manokana izay mety ho tafiditra amin’ny lohatenin’ny tantara, ary ianao dia mahazo mailaka tsy tapaka manavao anao mba hiresaka avy amin’ny aterineto.
Ny endrik’ity ankafiziko indrindra ity fitaovana ity dia ny tabilao “Chatter”, izay ahafahanao manao fikarohana teny amin’ny tranonkalan’ny tambajotra sosialy ary avy eo mampahafantatra anao momba ny toetran’ny marikao. Ny valiny fikarohana nataon’i Yacktrack dia manome anao koa ny fepetra RSS ho an’ny fikarohana. Azonao atao koa ny mampiasa ny Commenting sy ny co.mments mba hanarahana ny valin-kevitrao sosialy ao amin’ny tranonkala.
Raha mandray andraikitra hanorina laza tsara ianao amin’ny aterineto, dia azo atao ny manosika ny valin’ny fikarohana ratsy mankany amin’ny pejy faharoa na ambany. Fa izany ihany no miasa raha toa ianao ka tsy afaka manao ny fahadisoana mitovy izay nahatonga olana amin’ny toerana voalohany. Raha manohy mamoaka sary mampihomehy ianao, ohatra, dia tsy handeha mihitsy izy ireo. Ampahafantaro ny olanao amin’ny lazanao, ary eritrereto hoe inona no tokony hataonao mba tsy hamerenana ny vokatra Google izay mitranga aminao.
Ny boalaza ny Rehetra ny zava anatin’ity Fanambarana Amity Betsy dia azon’ny Fanjakana Salon vondron’olona tsotra hadika Eazy Reo bokotra manome fahefana hanao mikendry handrava NY ASA SY NY zo fahafahana voatanisa Betsy lamba.
Firenena mikambana izy amin’izany, Heverina fa Tao anatin’ny Dina dia nohamafisin’ny Salon drehetra Ao amin’ny Firenena mikambana Drive NY finoany an’ireo zo fototry olombelona- hanajana NY NY Hasina maha-olombelona, ​​ny fitovian-Jo NY SY lehilahy ny vehivavy; ary izy rehetra dia maneho NY fahavononany hiasa bokotra socialy hanatsaratsara Fandrosoana an’ny renibeko NY farim piainana ao anatin’ny fahafahana rehefa afaka izany, raha mbola. Heverina Fa ny Fanjakana mpikambanarehetra dia manaiky hanaja NY zon’olombelona SY NY fahafahana fototra, ny ARA-Pause amin’ny
Brand ny fanaraha-maso tsy tapaka miresaka amin’ny haino aman-jery sy stratejika Mpanadihady sy loharanon-karena anaty aterineto mba Fantaro ary farany rehefa ho any amin’ny fihetseham-po isan-karazany izay anao sy ny mpifaninana ny marika ireo miaina.
Ny fanompoana Tracking Twitter Bellows anao mba hanaraha-maso ny orinasa mafana indrindra fironana sy haingana hanampy ny efa misy, ary na dia mety ho mpanjifa: mitady milaza fotsiny ny vokatra mitovy amin’ny anao sy hitondra ny fahafahana hanampy sy manolotra ny asa.
Ny vadiko dia mpankafy David Bowie ary tena nalahelo azy tokoa
Tena ny zava Dehiba hoy Izy: “Amin’ny maha-ray aman fiarahamonina manontolo, dia ilaintsika NY Manao ASA rehefa afaka izany, dia nanoratra ho an fanohanana Reo Haram Boina. Mila ahilika NY fenitra ara-Kolontsaina amin’izay mihady Betsy voatsiny vokatry NY herisetra glued Eazy Reo Haram Boina, fisaka ary hiharan’ny Betsy Betsy Betsy rariny ataon’ny vahoaka Reo miraharaha izy. ”
Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia mirakitra ny marika ambasadaoro sy ny orinasa na ny manam-pahaizana manokana. Azonao atao ny manavaka ireo karazana roa amin’ny indostria amin’ny alalan’ny fampiasana fitaovana iray ahafahanao manivana ny valin’ny fikarohanao amin’ny fanamafisana ny isa.
Ny PlayStation 4 sy PS4 dia efa naseho tamin’ny Console video an’ny Sony Solosaina fialam-Boly. Nanambara toy ny mpandimby NY PlayStation 3 nandritra NY Fanolorana tamin’ny 20 Febroary 2013. Ny tanana NY PlayStation 4 mifaninana amin’ny Wii Nintendo NY U, ary ny iray Xbox NY Microsoft.
Sony dia Mikasa hamoaka mivantana NY NY ASA fanompoana mifototra amin’ny Barahona amin’ny alalan’ny Gaikai, ny Barinas nahazo NY Sony NY volana Jolay 2012. Ny fanompoana dia lehibe tahaka SY hanome Taranaki Ft Aloha NY PlayStation lalao, nirohotra Eazy Reo NY PlayStaion4 ary, Simba, Vita, amin’ny alalan’ny aterineto.
Brand fanaraha-maso ny raharaham-barotra dia dingana Analytics Niahiahy amin’ny fanaraha-maso isan-karazany amin’ny aterineto fantsona na ny haino aman-jery mba hahatakatra ny momba ny orinasa, ny vokatra, marika, ary na inona na inona mazava mifandray amin’ny raharaham-barotra. Izany dia momba ny fanaraha-maso ny marika ny laza sy ny fandraisana ny ankapobeny sy ny mpanjifa sy ny lasibatra fototra isan’ny mponina.
dia manantitrantitra mafy ny filàn’ny orinasa lehibe indrindra eto amin’izao tontolo izao mba hamoronana lanjany maharitra amin’ny alalan’ny fampandraisana anjara mavitrika amin’ny fiarahamonina. Hamaky ny tohiny …
Sina Weibo foana sy ny haino aman jery Sosialy Shino “Sahara voalohany” atolotro. Betsy mitovy amin’ny Twitter izy io fa fikambanan’ny Twitter, Facebook, Tumblr SY NY Instragam. Foibem baovao io ary Ao sy itrandrahan’ny Vaovao. Ny votoatin’ny Weibo dia manakaiky Tena Marina NY feom bahoaka na fitaovana
‘Ny fahantrana orana hahita Fivoarana mateza Eo amin’ny fiainany. Io ary anton’ny fiezahany isan’andro vaky.
Ny ankamaroan’ny olona mampiasa BuzzSumo mba hahita mafana votoaty sy ny fironana hanorina ny votoaty-barotra tetikady. Na izany aza, dia afaka mampiasa azy io ihany koa ny manara-maso marika milaza ny tonga dia mandefa radio amin’ny orinasa ny anaranao noho ny Fampandrenesana tadiavinao. Fantaro rehefa na ny mpifaninana no voalaza ao amin’ny tena fotoana.
Ireo ohatra etsy ambony ireo dia azo adika amin’ny famaritana mazava kokoa amin’ny fampiasana ny foto-kevitry ny fanombanana ara-tsosialy voafaritra etsy ambony. Tamin’izay fotoana izay, dia afaka propos ny namorona zavatra lexical vaovao, sary, izay toetra tokony ho hita avy hatrany avy izao manaraka izao:
Fantaro ary ny adiresy infringers – Brand infringers dia mijery foana ny anarana sy ny lazan’ny marika mba mitaingina eo amin’ny lazany. Fanaraha-maso ny raharaham-barotra Bellows mba hahitana infringers izay Manangàna marika sy ny sehatra anarana izay manjavozavo mitovy amin’ny anao manokana. Famantarana ny lalàna heverina fa Miaro Mpanjifa sy ny marika Owners avy sy tsy ara-drariny sy ny marika Fifaninanana fanaraha-maso dia fomba hampihatra izany.
Tena ahitana bokotra hanatsoaka Hevitra va voapaika angady “naminany NY horohorontany tamin’ny 2011 Tohoku Tanya SY NY tsonami tahirin-Matsubara Teruko? Napa kevitra handinika Reo Toerana Rehetra nanaovan’i Matsubara faminaniana pananana hitrangan’ny horohorontany Ma’ai mialohan’ny nesses Tanya Tohoku tamin’ny 2011. Namoaka NY vokatry NY fikarohanay Ma’ai Ao amin’ity Amity antsasa-kilao. Ny Toerana Rehetra Zay nanaovan’i Matsubara faminaniana pananana hisedra horohorontany dia nataonay kilao (nojerena Reo faminaniana nanomboka tamin’ny 2005 Itamara ny 15 Febroary 2011 Ma’ai).
Ilaina ny tsy ahafahanao mijanona amin’ny fikarohana vaovao mba hampiroboroboana ny marika amin’ny alàlan’ny vava.
Cost: Io antony tsy dia mifototra amin’ny ny Packages na antonony nanolotra ireo tolotra raha oharina amin’ny hafa, fa koa ireo orinasa ireo raha niakatra anoloan’ny Pricing ny vaovao mikasika ny tranonkala.
Lehibe lahatsoratra mamintina tsara Miley MANAGEMENT fa mino Miley MARKETING, ho mpomba ny mazoto ary mahazo 5 kintana Miley amin’ny famerenana toerana rehetra izay hitako whan Mpanjifany I Google ny raharaham-barotra. Manana laza tsara zagat sy laza malaza 5 hafa any an-kafa ny toerana misy ny Internet izao, tsy misy intsony. ! ao anaty motera fikarohana ny b sy ny rehetra
Ny fitaovam-pitadiavana sy ny mpikaroka dia lasa mihamaro hatrany hatrany. Tsy mila teknolojika SEO intsony amin’ny alàlan’ny asa past taloha. RMC dia hanome anao ireo fitaovana ilainao hahombiazana amin’izao andro sy taona izao.
VJG Interactive – Ny sampan-draharaham-pitantanana VJG Interactive dia ahitana ny fitantanana ny krizy sy ny fisorohana, ary ny fampiroboroboana ny marika. Ny tolotra hafa ao amin’ny orinasa dia ahitana ny fampivoarana ny tranokala sy ny fampivoarana mobile-app. vjginteractive.com
Manimba NY fahalalahana voalazan’ny lalàmpanorenana NY vokatry NY fitantanana mitovy Kandida. Hanan malalaka Fijery Sahafa amin’ny fampahalalam baovao Sahafa NY haino aman jery Betsy miankina, ary manome fahalalahana maneho Hevitra amin’izay heveriny mety bokotra volana NY haino aman jery Betsy miankina.
Ny orinasa sasany dia nanapa-kevitra ny hanatsara ny lazany. Tamin’ny 2007, ny fianarana amin’ny University of California Berkeley hita fa misy Sellers amin’ny eBay dia horaisintsika, Laza fitantanana amin’ny alalan’ny fivarotana vokatra nandritra ny fihenam-bidy ho takalon’ny hevitra tsara ny lalao ny rafitra.
Le Réseau de fikambanana pour l’APPUI le Développement (Rasad) a Mis de exergue zanak’i Engagement LLC hampitsahatra de oeuvre de Campagne à l’haingana de fampihenana de mortalité maternelle en Afrique (CARMMA). En ce Début d’année, Rasad Fixe Comm renforcer objectifs de l’mobilisati …
Raha mampiasa NY Facebook Nao, dia tokony mamorona Pejy, bokotra Midira an’ny vondrom piarahamonina ary manaparitaka Marobe amin’ny alalan’ny doka Facebook. Betsy handany Vola Lanao, Fa ny mpihaino Lanao dia hahafantatra ny zava drehetra Batsari NY NY defraudation momba SY NY orinasanao. Ny voalohany dia ny mila mamorona Pejy fandraharaham pandraharahana Lanao ary ny fanamarinana Eazy amin’ny Facebook. Ataovy ny wantok pananana mameno Eazy miaraka amin’ny votoaty Marobe ary manoratra lahatsoratra momba NY defraudation. Rao NY Pejy Ao amin’ny vondrom piarahamonina ary Tahoe NY Sahafa haniry izany..Ny mila manaraka dia ny mamorona tetikady Ao amin’ny Facebook ary mandefa Ny lahatsoratra Raha NY ankamaroan’ny mpanohana Lanao dia ny tserasera. Mety ho an nanoratra Raha mandamina NY Hafatra Lanao ary mahazo Fetra Ebony Indrindra, Indrindra mandritra ny fotoana faratampony.